Maxaa laga baran karaa xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya? - Diblomaasi
Related Topics:FeaturedMaxaa laga baran karaa xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya?
Maxamed Mukhtaar waa wariye wax ka qora siyaasadda Soomaaliya, falanqeynta siyaasadda Villa Somalia iyo caalamka intiisa kale. Sidoo kale wuxuu wax ka qoraa arrimaha bulshada, horumarinta nolosha, iyo amniga. Wuxuu shahaadada koowaad ee jamaacadeed ku qaatay cilmiga kombuutarka.